काठमाडौं महानगरले वडा ३ क्षेत्रमा पर्ने महाराजगञ्ज बाँसवारीमा निर्माण योजना बनाएको दमकल भवन सम्बन्धि शनिवार सार्वजनिक सुनुवाई सम्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रममा वडा २ र ४ का वडाध्यक्षसहित स्थानीयहरु सहभागी थिए ।
‘हामीले दमकल भवन बनाउने योजना र यसका सेवाका बारेमा स्थानीयलाई जानकारी दिन र योजनामा स्थानीयको सुझाव लिन सुनुवाई कार्यक्रम आयोजना गरेका हौं । यसमा हामीले सकारात्मक प्रतिक्रिया पायौं ।’ सुनुवाई कार्यक्रममा सहभागीको सुझावपछि प्रतिक्रिया दिँदै वडा ३ का अध्यक्ष दीपक के. सी. ले भने — ‘वडा ३ लाई सबै प्रकारका सेवा र सुविधा भएको वडाका रुपमा विकास गर्ने क्रममा दमकल भवन निर्माण गर्न लागिएको हो । विशिष्ट पदका व्यक्तिहरु बस्ने, विशेषज्ञ सेवा दिने धेरै अस्पताल भएको, दूतावासहरुको भएको वडा हाम्रो पहिचान हो । यहाँ दमकल भवन निर्माण भएपछि महानगरका वडा २ र ४ तथा बुढानिलकण्ठ नगर क्षेत्रमा आगलागीका समयमा छिटो दमकल पठाउन सकिन्छ ।’
त्यस क्रममा बोल्दै वडा २ का अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ र वडा ४ का अध्यक्ष मोहन विष्टले विपद् व्यवस्थापनको काम सीमानाले नबाँधिएको काम भएकोले सबै मिलेर योजना कार्यान्वयन गर्नु पर्ने धारणा राखे । 'आगो लागेका बेला घटनास्थलमा दमकल जति छिटो पुग्न सक्यो उति नै जनधनको क्षति कम गराउन सकिन्छ । त्यसैले यो मानवीय सेवाको काम हो । यसलाई पूर्वाधार निर्माणको काममा रुपमा मात्र बुझ्नु हुँदैन,' उनीहरुको भनाइ थियो ।
सुनुवाई कार्यक्रममा सहरी पूर्वाधार बिभागका इञ्जिनियर प्रेमबहादुर श्रेष्ठले दमकल भवनको प्राबिधिक योजनाका बारेमा प्रस्तुतिकरण गरेका थिए । उनका अनुसार यो भवन २१. ५ आना जग्गामा क्षेत्रफल भएको जग्गामा निर्माण हुनेछ । भवन ६ हजार ६२९ स्क्वायर फिट क्षेत्रफलको हुनेछ । जसमा १ हजार ९२१ स्क्वायर फिटका २ वटा बेसमेन्ट हुनेछन् । २ हजार ४०१ स्क्वायर फिटको भुइँतला र ३८६ स्क्वायर फिटको छानो हुनेछ ।
भवनमा टेलिभिजन हेर्ने एउटा कोठा हुनेछ । २० जना अग्नि नियन्त्रक बस्न मिल्ने कोठाहरु हुनेछन् । ४० जनालाई राखेर प्रशिक्षण दिन मिल्ने बैठक कोठा हुनेछ । साझा शौचालयसहित ६ वटा शौचालय हुनेछन् ।
गुल्मीमा जीप दुर्घटना, ५ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु, २...
चितवनको माडीमा स्थापना भयो सशस्त्रको बीओपी